Arsene Wenger oo sheegay inay baacsan doonaan kooxaha Man United iyo Man City | Markacadey.net Facebook
Warka oo Video	8:30 am » Qarax culus oo maanta Ciidamada Kenya lagula eegtay Magaalada Kismaayo 6:04 am » Garsoore Soomaali ah oo qaban doona Furitaanka tartanka 8:50 pm » Daawo Video: Amisom oo ka hadashay dhul ballaaran oo ay maanta ka saareyn Xoogaga Shabaab 8:27 pm » Ciidamada Amniyaadka oo caawa dilay nin Macalin ahaa (Dhacdo Layaab Leh) 1:25 pm » Daawo Sawirada: Al Shabaab oo soo bandhigtay Saraakiil iyo hub ay ka soo qabsatay Kenya 12:53 pm » Daawo Video: C/naasir Seeraar oo sheegay in isku dhex yaac uu ka jiro Magaalada Kismaayo 10:51 am » WAR DEG DEG: Nin isku dilay Magaalada Baydhabo, kadib markii uu dilay xaaskiisa 9:20 am » Sirdoonka Dowladda oo ogaaday goobaha laga soo tuuray madaafiicdii xalay lagu weeraray Villa Somalia 9:04 am » Xildhibaanadii Basaboorada iyo Computerada looga qaatay Magaalada Nairobi oo ka hadlay 8:38 am » Dowladda Somaliya oo ku dhawaaqday dagaalada wejiga 2-aad ee Al Shabaab By: Mastar // Dec 11 2012 at 3:19 pm // 1,030 Reads // Wararka Somalia Arsene Wenger oo sheegay inay baacsan doonaan kooxaha Man United iyo Man City Share Tweet
Arsene Wenger ayaa kalsooni ku qaba in Arsenal ay soo yareeyn karto farqiga u dhaxeeya iyaga iyo labada kooxood ee Manchester oo haatan u sareeya horyaalka.
Tababaraha Faransiiska ayaa aaminsan in 15ka dhibcood ee haatan u dhaxeeya iyaga iyo Manchester United inaysan aheyn wax aan macquul aheyn inay gaaraan ka dib markii kooxdiisa ay sabtidii West Brom ku garaacday Emirates Stadium islamarkaana u dhaqaaqday kaalinta 7aad.
Wenger ayaase qirsan inay adag tahay inay ka daba tagaan kooxda hogaanka u heysa horyaalka qeybta labaad ee xilli ciyaareedkan gaar ahaan ka dib markii uu daawaday kulankii Manchester derby.
“Kulanii Manchester derby waxa uu ahaa mid heer wanaagsan, barbaro ayaana noqon kartay natiijad cadaalad ah.” ayuu Wenger u sheegay website-ka kooxdiisa.
“Manchester City waa ay soo laabatay, waxa ay ku bilowdeen ciyaarta si wanaagsan, laakiin Manchester United ayaa soo bandhigtay inay halis ka yihiin afka hore.
“Kulamadii kale ee la ciyaaray isbuuc dhamaadkii waxa ay ahaayeen kuwa xiiso leh. Waxaana ay ku tusineysaa in haddii aad ku taagnaato qaab ciyaareed sareeya had iyo jeer inaad gaareyso halkaas dhamaadka xilli ciyaareedka. Haatan muhim ayay inoo tahay inaan qaab ciyaareed sareeya ku socono.
“Farqiga inoo dhaxeeya hogaanka horyaalka iyo anaga waa mid weyn, laakiin ma ahan mid weyn oo lagu fekeri karo inuu soo dhamaaday tartanka horyaalka.”